ရခိုင်ပဋိပက္ခ နောက်ကွယ်မှ အမျိုးသားရေး အစွန်းရောက် မီဒီယာ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« “ရိုဟင်ဂျာ/ဘင်္ဂါလီမဟုတ်ဘူး ကျနော်တို့ ကမန်တွေပါ” ကျောက်နီမော်ရွာသားနှင့် RFA Interview
အကယ်၍ ရိုဟင်ဂျာတွေသာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် »
ရခိုင်ပဋိပက္ခ နောက်ကွယ်မှ အမျိုးသားရေး အစွန်းရောက် မီဒီယာ
အောက်တိုဘာ၊ ၃၀ ၊ ၂၀၁၂
Source:http://asiasentinel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4938&Itemid=208 မှ ဖော်ပြထားသော ဆောင်းပါးကို M-Media မှ ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုဖော်ပြသည်။
မြန်မာပြည်က လူများစုဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသားရေး သွေးကြွနေသူများနဲ့ ရခိုင်လူမျိုးစုတွေ၊ အဲဒီသူတွေကို တာဝန်မဲ့ ယုံတင်မက အရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းတင်ပြီး အားပေးထောက်ပံ့နေကြတဲ့ စာပုံနှိပ်တိုက်တွေ၊ အဲဒီလူတွေသာ ဒီရခိုင်ပဋိပက္ခကြီးထဲမှာ အဓိက ဇာတ်ကောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က အတွင်းအဇ္ဈတကို ပိတ်ပြီး ရိုဟင်ဂျာတွေကို တရားမ၀င် ခိုးဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေ၊ အကြမ်းဖက်သမားတွေလို့ သမုတ်ကြပါသေးတယ်။
အခုအချိန်မှာ အန္တီရိုဟင်ဂျာ လှုပ်ရှားမှုကတော့ အန္တီမွတ်စလင်မ် လှုပ်ရှားမှုဘက်ကို အသွင်ကူးပြောင်းခဲ့ပါပြီ။ အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ဆူပူသောင်းကျန်းမှုတွေမှာ ဓားစာခံတွေကတော့ တိုင်းရင်းသားမွတ်စလင်မ်၊ ကမန်လူမျိုးတွေပါ။ ၇ ရက်အတွင်း လူပေါင်း ၂၈၀၀၀ ကျော်အိုးအိမ်မဲ့ခဲ့တဲ့ထဲမှာ ၂၇၃၀၀ က မွတ်စလင်မ်တွေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကို ကုလသမဂ္ဂ က ကြေငြာခဲ့တဲ့အပြင် အဲဒီ ၂၇၃၀၀ ထဲမှာမှ အများစုက ကမန်တိုင်းရင်းသား မွတ်စလင်မ်တွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ အိမ်ခြေထောင်ပေါင်းများစွာ ဖျက်ဆီးခံရကြောင်း၊ လူရာပေါင်းများစွာ အသတ်ခံရတဲ့အကြောင်း စသဖြင့် ခန့်မှန်းပြောဆိုကြပါတယ်။
ဒီလိုပါပဲ။ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်မှုအဖွဲ့ (HRW) က ဂြိုလ်တုမှ တဆင့်ရိုက်ယူထားတဲ့ သတင်းဓာတ်ပုံတွေအရ အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်နေ့မှာ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့မှာ ကြီးမားလှတဲ့ မြေဧရိယာပမာဏကြီး မီးလောင်ကျွမ်းနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ HRW က အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်နေရတဲ့ မွတ်စလင်မ် ထောင်ပေါင်းများစွာ ပင်လယ်ထဲမှာ လှေငယ်လေးတွေနဲ့ ရှိနေတဲ့အကြောင်း၊ ကမ်းခြေတလျောက်နဲ့ ဆိပ်ကမ်းတွေမှာလည်း ရှိနေတယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့တွေ၊ နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေနဲ့ ပြည်ပက မြန်မာမီဒီယာတွေက ဒီလိုမျိုး ဆိုးဝါးလှတဲ့ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်မှုကို သတင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က သက်သေခံနေတဲ့ကြတဲ့ အဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ တော်တော်ကလေးဆန့်ကျင်တဲ့ အဖြစ်ကတော့ ရခိုင်ပဋိပက္ခမှာ အမှန်တကယ်ဓားစာခံဖြစ်နေတာက မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပါလို့ ယုံကြည်နေကြတဲ့ ရခိုင်နဲ့ ဗမာလူများစုကြီးရဲ့ ဖြစ်အင်ပါပဲ။ အမှန်ကတော့ မွတ်စလင်မ်တွေကသာ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဓားစာခံဖြစ်နေတာပါ။ ဒါပေမယ့် ရခိုင်တွေကရော ဒုက္ခမခံစားရဘူးလို့ ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ပါ။ အချက်အလက်တွေအရ လူအမြောက်အမြားအသတ်ခံရသလို အိမ်တွေ မီးရှို့ခံရပါတယ်။ ငြင်းမရနိုင်တဲ့အချက်ကတော့ ပဋိပက္ခမှာ မွတ်စလင်မ်တွေကသာ အများစုကြီး ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့ ဒုက္ခသည်များ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတောင် လူများစုဗမာတွေက ရိုဟင်ဂျာတွေသည် ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခံနေရသူများမဟုတ်၊ သူတို့တွေဟာ ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမား၊ ပြဿနာ ဖန်တီးကြသူတွေ၊ ပြဿနာမှာ အဓိက လက်သည်တရားခံတွေဖြစ်ကြတယ်၊ ဒါကြောင့် သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာသာသနာကို ဖိနှိပ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးကို ထပ်ကာထပ်ကာ ဖော်ပြပြောဆိုနေကြတာပါ။ ဒီပြဿနာကြီးထဲမှာ လူတွေသေနေကြတာတွေ၊ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ကလူပြုခံနေရတာတွေ အမြန်ဆုံးပပျောက်သွားဖို့နဲ့ ဘယ်သူဘယ်သူကမှ ဒီလိုမျိုးအတိဒုက္ခကို ခံစားဖို့ မသင့်တော်ဘူးလို့ လက်သင့်ခံခြင်းမရှိ သလို ပြဿနာတစ်ခုလုံး ကို နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ပိုင်းရဲ့ နားလည်သဘောပေါက်မှုနဲ့သာ ဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတာကိုလည်း သဘောမပေါက်ကြပါဘူး။
ဒီလိုမျိုး ကိုယ့်သေတွင်းကိုယ်တူးတဲ့ နည်းလမ်းရဲ့ နိုင်ငံရေးအကျိုး သက်ရောက်မှုကတော့ အန္တီမွတ်စလင်မ် လှုပ်ရှားမှုကြီးပါပဲ။ (တနည်းပြောရရင် သူတို့ဟာ ကိုယ့်သေတွင်းကိုယ်တူးပြီး နိုင်ငံရေးအရ အကျိုးအမြတ်ရှိလှတဲ့ အန္တီမွတ်စလင်မ်လှုပ်ရှားမှုကြီးကို ဖန်တီးနေတာပါ။) ဒါပေမယ့် အန္တီမွတ်စလင်မ် လှုပ်ရှားမှုကြီးကတော့ ကျယ်ပြောစွာပြန့်နှံ့ပြီးဖြစ်နေပါပြီ။
ဒီလိုမျိုး အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခကို လူများစုကြီးထောက်ခံနေတာက ဘာကြောင့်ပါလဲ။ ပြည်တွင်းအခြေဆိုက် မီဒီယာများကြောင့်ပါပဲ။ သူတို့တွေဟာ အစွန်းရောက်အမျိုးသားရေးဝါဒတွေနဲ့ သတင်းမှားတွေကိုသာ လွန်လွန်ကျူးကျူးဖော်ပြဖြန့်ချိနေပါတယ်။ လူတွေကို စိုးရိမ်ပူပန်အောင်၊ လုံခြုံမှုမရှိတော့ပါလားလို့ ခံစားရအောင်၊ (ဗမာနဲ့ရခိုင်) တွေကသာ အကြမ်းဖက်သမား ရိုဟင်ဂျာလို့ ကင်ပွန်းတပ်ခံထားရသူတွေရဲ့ ဓားစာခံတွေဖြစ်နေတာလို့ ထင်ရအောင် ရေးသားနေကြတာပါ။
ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးအခြေအနေမှာ ရခိုင်ပြဿနာ ချုပ်ငြိမ်းလိုတယ်ဆိုရင် အဲဒီဂျာနယ်တွေကို ထုတ်ဝေခွင့် ရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်းက ပထမခြေလှမ်းဖြစ်မှာပါ။ ယာယီဖြစ်ဖြစ် ရပ်ဆိုင်းရပါမယ်။ ဒီမို ဗမာပြည်လို့ ခေါ်နေကြတဲ့အချိန်မှာ ဂျာနယ်တွေ ပိတ်ဖို့တောင်းဆိုခြင်းက နည်းနည်းတော့ ခက်ထန်နေပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အကျည်းတန်လှတဲ့ အမှန်တရားကတော့ မြန်မာစကားနဲ့ ထုတ်ဝေတဲ့ ဂျာနယ်တွေဟာ သတင်းမှားတွေ၊ ပုဂ္ဂလိကရွေးချယ်ထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဖော်ပြနေပြီး လူစုလူဝေးနဲ့ ဆူပူသောင်းကျန်းရလေအောင်၊ အဲဒီလိုသောင်းကျန်းပေမယ့် အရှက် အိနြေ္ဒထားရကောင်းမှန်း မသိရလေအောင် မီးစထိုးပေးနေပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာတော့ ပြည်တွင်းဖြစ်ဂျာနယ်တွေရဲ့ စွမ်းအားက ကြီးမားလှပါတယ်။ ဒီလို အသစ်အသစ်ထုတ်ဝေလာတဲ့ ဂျာနယ်တွေဟာ ဆယ်စုနှစ်များစွာ သတင်းအချက်အလက် ငတ်မွတ်နေကြတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက်တော့ အိုအေစစ်ပါပဲ။ မြို့ကြီးတွေသာမက သာမာန်မြို့သေးသေးလေးတွေမှာတောင် ဂျာနယ်သတင်းစာ အရောင်းဆိုင် ကလေးတွေကို နေရာအနှံ့တွေ့နေရပါပြီ။ ဂျာနယ်အသစ်တစ်စောင်ပြီး တစ်စောင်ထွက်လာသလို စာဖတ်ပရိသတ်ကလည်း ဆိုက္ကားသမားကနေ၊ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်အထိ တိုးတက်ရောက်ရှိသွားပါပြီ။
နိုင်ငံတွင်းက ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံးဂျာနယ် ၂စောင်ကတော့ သည်ဗွိုက်စ်နဲ့ အလဲဗင်းတို့ပါပဲ။ သူတို့တွေကတော့ ဘင်္ဂါလီခိုးဝင်သူများလို့ သူတို့ကိုယ်တိုင်ခေါ်နေတဲ့သူ များကို မီဒီယာစစ်ပွဲ ဆင်နွှဲနေကြပါတော့တယ်။ သူတို့တွေဟာ လွတ်လပ်စွာရေးသားပိုင်ခွင့်အပေါ်မှာ တာဝန်သိသိနဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတာမျိုးမဟုတ်ပါ။ လွတ်လပ်စွာရေးသားဖော်ပြပြောဆိုပိုင်ခွင့်ကတော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားတဲ့ အစိုးရက အတွေးအခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်ကနေ ခွင့်ပြုထားတာပါ။ အဲဒီ ပြည်တွင်းဖြစ် လွတ်လပ်စွာရေးသား ဖော်ပြပြောဆိုပိုင်ခွင့်က ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေငြာစာတမ်းပါ ဖော်ပြချက်ကနေ မှီငြမ်းထားပေမယ့်လည်း လူ့အခွင့်အရေးရဲ့ စံပုံစံမှန်ကတော့ သူတို့ကိုယ်ပိုင် ယဉ်ကျေးမှု၊ စိတ်ဓာတ်နဲ့ နိုင်ငံရေးလိုအင်ဆန္ဒတွေနဲ့ ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးဆန့်ကျင်နေပါတယ်။
ဒီပြည်တွင်းဖြစ် သတင်းမီဒီယာတွေဟာ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို အကာအကွယ်ပေးပြီး ရိုဟင်ဂျာများကို တိုင်းပြည်ရဲ့ အန္တရာယ်ကောင်တွေ၊ နိုင်ငံခြားသား ခိုးဝင်လာသူတွေအဖြစ်သာ ဖော်ပြနေကြပါတယ်။ သို့သော် ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဆန့်ကျင်ဖော်ပြချက်တွေအားလုံးက သက်သေအထောက်အထားမရှိပါဘူး။ သူတို့မီဒီယာ တွေက ရိုဟင်ဂျာကို ရင်းနှီးပြီး ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ နိုင်ငံရေးလိုအင်ဆန္ဒကို ထောက်ခံနေကြတာပါ။ ဒီလိုပုံစံမျိုး အမျိုးသားရေးဝါဒကတော့ လူတွေအတွက် မှားယွင်းတဲ့အတွေးအခေါ်သာ ဖြစ်စေမှာပါ။
ဥပမာ – အောက်တိုဘာ ၂၇ (HRW မှ သတင်းဓာတ်ပုံများ တင်အပြီး) မှာ သည်ဗွိုက်စ်ဝီးကလီးဂျာနယ်က ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များရဲ့ သတင်းအချက်လက် တဘက်တည်းကိုသာ အမှီသဟဲပြုထားတဲ့ သတင်းတပုဒ် တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီသတင်းမှာ အာရကန်လိဂ်ဖော် ဒီမိုကရေစီ (ရခိုင် ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် – ALD) ရဲ့ ပြောဆိုမှုတစ်ခုတည်းကို ကိုးကားထားပါတယ်။ ရခိုင် ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အတွင်းရေးမှူး ၊ ဦးမျိုးကျော် ရဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ နိုင်ငံရေးအရ အမြတ်ထုတ်နိုင်တဲ့ ဖော်ပြချက်ကို ကိုးကားပြီး အိုအိုင်စီ(OIC) ကတော့ ဒီပြဿနာမှာ နောက်ကွယ်ကြိုးကိုင်နေတာပါလို့ ရေးသားထားပါတယ်။ ။ နောက်ဆက်တွဲမှာတော့ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး မြန်မာသမ္မတနဲ့ အာရကန်လိဂ်တို့ သဘောတူထုတ်ပြန်ထားတဲ့ (ရိုဟင်ဂျာ များအား တတိယနိုင်ငံပို့ရေး) အဆိုကို အကျယ်ချဲ့ပြီး ဖော်ပြထားတာပါ။
ဒီလိုပါပဲ၊ အလဲဗင်းမီဒီယာရဲ့ ၀ီကလီးအလဲဗင်း (HRW သတင်းဓာတ်ပုံများ တက်လာအပြီး နောက်နှစ်ရက်အကြာ၊ ကုလမှ အိုးအိမ်မဲ့ ဓားစာခံအများစုမှာ မွတ်စလင်မ်များဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုလိုက်သည့် နေ့ရက်) ကလည်း အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်နေ့မှာ အာဘော်ဆောင်းပါးတစ်ခု တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အလဲဗင်းနဲ့ သည်ဗွိုက်စ်တို့ တင်ပြမှုနှစ်ခုစလုံးက ရခိုင်နဲ့ ရိုဟင်ဂျာများအကြား အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ဖို့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံကို ငြင်းဆန်ပယ်ချထားတာမျိုးပါ။ အလဲဗင်းမှာ အာဘော်ရေးသားသူက ရိုဟင်ဂျာ(မွတ်စလင်မ်)များကို ပြဿနာကောင်များဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
နောက်ကွယ်ကြိုးကိုင်သူဘယ်သူလဲဆိုတဲ့ အလဲဗင်းရဲ့ဆောင်းပါးမှာတော့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို သူတို့ကိုယ်ပိုင် “တိုင်းရင်းသားဖြစ်ခွင့်ရရေး အိပ်မက်” အတွက်ရည်စူးပြီး လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း ဖြစ်ရလေအောင် ပြုလုပ်ဖန်တီးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်း ယိုးစွပ်သမုတ်ထားပါတယ်။ ဒါ့ပြင် အဲဒီဆောင်းပါးမှာ မွတ်စလင်မ်ဗလီဆရာ အယောက် ၃၀ ဟာ ဘူးသီးတောင်နဲ့ မောင်တောတို့ကို ပဋိပက္ခဖြစ်နေစဉ်အတွင်း အလည်အပတ်ရောက်ရှိနေကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဆောင်းပါးရှင် တင်ဆက်ထားပုံကတော့ ဒီမွတ်စလင်မ်တွေကသာ ပဋိပက္ခကို စတင်သူတွေဖြစ်တာကြောင့် အခုသူတို့ အသက်ကို ဖက်နဲ့ထုတ်ပြီး ပြေးလွှားနေရတာတွေကတော့ စာရင်းထဲထည့်ဖို့ မလိုတော့ပေါင်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးပါ။
ဒီလိုမျိုး အမှားအယွင်းနဲ့ သဘောထားအမြင်တွေက ချွင်းချက်အဖြစ် ထားရမယ့် ကိစ္စတွေမဟုတ်တော့ပါဘူး၊ အဲဒီအမှားတွေ၊ သဘောထားဖြန့်ချိမှုတွေက အုပ်စိုးမင်းမူနေပါပြီ။ ဒီနှစ် ဇွန်လကတည်းက အဲဒီဂျာနယ်နှစ်စောင်လုံး ရိုဟင်ဂျာတွေကို ပေါ်ပေါ်တင်တင် ဆန့်ကျင်တဲ့အမြင်တွေ ချပြရေးသားနေကြတာပါ။
စုစည်းထားချက်အရ ဒီဂျာနယ်တွေဟာ ရခိုင်နယ်မြေအတွင်း နှစ်ရာပေါင်းများစွာ နေလာကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်မှာ ပေါက်မြောက်နက်ရှိုင်းစွာ နားလည်မှုလွဲမှားဖို့ နဲ့ အမုန်းတရားအာဃာတတွေ ကြီးထွားစေဖို့အတွက်တော့ ကြားခံလက်နက်တွေပါပဲ။ ဒီဂျာနယ်တွေက ရိုဟင်ဂျာတွေကသာ ပြဿနာကောင်တွေ၊ သူတို့စလို့ ဖြစ်တာပဲ၊ သူတို့က ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်မီးရှို့ထွက်ပြေးကြတာပဲ၊ သူတို့တွေက တရားခံတွေပဲ စသဖြင့်သာ ရေးသားခဲ့ကြတာပါ။ သူတို့ရေးသားပုံကတော့ ရခိုင်တွေသည်ဓားစာခံတွေဖြစ်တယ်၊ ရိုဟင်ဂျာတွေက တရားခံတွေဖြစ်တယ်။
ဒီဂျာနယ်တွေဟာ မွတ်စလင်မ်များ အန္တရာယ်နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရာပါလားဆိုတဲ့ အကျည်းတန်အမှန်တရားကို၊ “သူတို့(ရခိုင်)တွေကသာ ဓားစာခံတွေပါ၊ ရိုဟင်ဂျာတွေက အပြစ်သားတွေပါ” ဆိုတဲ့ စကားမျိုး ရေလဲသုံးစွဲပြီး ဖုန်းကွယ်ထားကြတာပါ။ ပြီးတော့ လူတွေရဲ့ နှလုံးသည်းပွတ်ထဲကို ရိုဟင်ဂျာဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်တွေ အမြင်တွေ ထည့်သွင်းပေးပါတော့တယ်။ ပြီးတော့မှ ပဋိပက္ခအဆုံးသတ်ရေးကို ခုတုံးလုပ်ပြီး ယိုးစွပ်မှုများများနဲ့ မှုန်းခြယ်ထားကြတာပါ။
ဒီဂျာနယ်နှစ်စောင်လုံးက ကျင့်ဝတ်ပိုင်းနဲ့ ကွာလတီပိုင်းအရမဟုတ်ဘဲ (တခြားအကြောင်းများကြောင့်) ပြည်တွင်းမှာတော့ နာမည်အကြီးဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။ သူတို့ဘာရေးရေး ပရိသတ်က ယုံကြည်လက်ခံနေပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ (သူတို့နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်) သတင်းအရင်းအမြစ်တွေ အားလုံးကို အမှားအယွင်းတွေ၊ လုပ်ကြံဖန်တီးမှုတွေအဖြစ်သာ ထင်မြင်ယူဆပါတယ်။ ဒီတော့ ကမ္ဘာက ဘာကို သက်သေခံနေကြသလဲဆိုတာ မြန်မာတွေလက်ခံဖို့ ခက်ခဲသွားရပါတော့တယ်။
မျှမျှတတပြောကြကြေးဆိုရင်တော့ ဒီပြဿနာကို ရခိုင်တွေ ဖန်တီးတာမဟုတ်ပါ။ သူတို့တွေလည်း တိုက်ခိုက်သလို၊ တဘက်ကလည်း သူတို့ကို ပြန်တိုက်ပါတယ်။ နှစ်ဖက်စလုံး အဆုံးအရှုံးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရခိုင်တွေထက်ပိုပြီး မွတ်စလင်မ်ထုက ခံရတဲ့ဘက်ကဆိုတာကိုတော့ ဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင်ပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ ဒုက္ခသည် ၂၈၀၀၀ ကျော်မှာ ၂၇၀၀၀ က မွတ်စလင်မ်တွေ ဖြစ်နေစရာ အကြောင်းမရှိပါ။
ဘယ်သူပဲ ပဋိပက္ခကို စတင်ပါစေ၊ မီဒီယာဆိုတာမျိုးက တဘက်တည်းရပ်ပြီး တခြားတဘက်ကို မောင်းထုတ်ပစ်တာမျိုး မလုပ်သင့်ပါ။ ခုတော့ ပြည်တွင်းက သြဇာကြီးတဲ့ ပေါ်ပြူလာဂျာနယ်ကျော်တွေက ကျရှုံးခဲ့ပြန်ပါပြီ။ ပဋိပက္ခကို အဆုံးသတ်ရမယ့်အစား လောင်စာထိုးပြီး လူတွေကို လှည့်ဖျားခဲ့ပါတယ်။ နည်းလမ်းတွေကတော့ ရိုဟင်ဂျာမုန်းတီးရေး၊ အကြောက်တရားကြီးထွားရေး၊ (ငါတို့ကသာ) ဓားစာခံတွေ၊ ငါတို့ လုံခြုံမှုမရှိပါလားဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုးပေါ်ထွက်လာမယ့် အမြင်တွေ၊ လူတွေကို အုံကြွပြီး ဆူပူသောင်းကျန်းလာအောင်နဲ့ အဲဒီလို ဆူပူသောင်းကျန်းတာကို ထောက်ပံ့တဲ့အမြင်တွေပါပဲ။
ဒါကြောင့် ရခိုင်ပဋိပက္ခကို အဆုံးသတ်ဖို့ ပထမခြေလှမ်းက ဒီမြန်မာဘာသာနဲ့ထုတ်ဝေတဲ့ ဂျာနယ်တွေကို ခဏဖြစ်ဖြစ် ရပ်ဆိုင်းဖို့ပါပဲ။ သူတို့တွေက လူထုရဲ့အထင်အမြင်ကို အုံကြွယဉ်ကျေးမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲနေတာပါ။ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ လူတွေက သူတို့ကြောင့် ဆက်ပြီး အရူးဖြစ်နေကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဋိပက္ခကို အားကိုးအားထားပြုစရာအဖြစ် ဆက်လက် ဆွဲကိုင်ထားကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုမျိုးရေးသားဖော်ပြခြင်းက လွတ်လပ်မှုနဲ့ ဒီမိုကရေစီကနေ ပြန်လှည့်ပြီး စစ်အုပ်ချုပ်ရေးဆီပြန်သွားဖို့ ဆင့်ဆိုထားတာမျိုး မဟုတ်ပါ။ ဒီရေးသားဖော်ပြချက်က ကျင့်ဝတ်စောင့်ထိန်းမှုမရှိတဲ့ လူ့အသက်တွေ၊ ဂုဏ်သိက္ခာတွေကို စတေးနေတဲ့ မီဒီယာများအား ပိတ်ဆို့ပစ်ရမယ်လို့ ဆင့်ဆိုတိုက်တွန်းခြင်းပါ။
Tags: Burma, HRW, Human Rights Watch, Muslim, OIC, Organisation of Islamic Cooperation, Rakhine State, Rohingya people
This entry was posted on October 31, 2012 at 4:37 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.